2019 Top 10 vovo-javamanitra peptide lava malaza - Phcoker Chemical
2019 Top 10 vovo-dronono tsy misy pentina peptida malaza indrindra
NY TENIN'IREO FOMBA
# 1 MT2 (Melanotan-II) Fangaroana
Product Name: Fangaroana MT2 (Melanotan-II)
filaharany: As-Nle-cyclo (vipera-ny-DPhe-Arg-Trp-Lys) -NH2
Package size: 5g / kitapo, 10g / kitapo, 50g / kitapo
Availability: Ao amin'ny staoky
Ataovy mihamaizina ny hoditrao.
Ny fananganana miorim-paka ao amin'ny lehilahy.
Melanotan-II dia manafoana ny filanao ary mampihena ny fihenan'ny tavy maimaimpoana amin'ny fahazoana lanja, dia hamela anao hirobona miaraka amin'ny endrika salama sy tsara tarehy izany.
# 2 PT-141 (Bremelanotide) Fangaroana
Product Name: PT-141 (Bremelanotide) Fangaroana
filaharany: As-Nle-cyclo (vipera-ny-DPhe-Arg-Trp-Lys)
Package size: 10g / kitapo, 50g / kitapo, 100g / kitapo Availability: Ao amin'ny staoky
Product Name: Ny vovony BPC 157
Hatramin'ny ampiasain'ny peptides amin'ny fikarohana siantifika, fitsaboana ara-pitsaboana, indostrian'ny hatsaran-tarehy sy sehatra maro hafa dia misy fiakaran'ny vokatra eny an-tsena. Ny fidirana mora sy ny lazan'i Phcoker dia midika fa afaka miditra mora foana amin'ny vokatra peptide ianao.
Ny fanamby izao dia ny hahita vokatra avo lenta izay azo antoka sy mahomby amin'ny fotoana mitovy.Here dia famintinana ireo 10 vovo-dronono marobe peptide malaza indrindra amin'ny tsena.
FANDROSOANA: Ny atiny amin'ity tranokala ity dia natao ho an'ny antontam-baovao fotsiny ary tsy tokony ho raisina ho fitsaboana akory. Ny vokatra averinay eto amin'ity tranokala ity, sy ny fampahalalana nomena, dia natao hampiasain'ny olon-dehibe tompon'andraikitra mandritra ny taona 18.
10 malaza vovo-kanina peptide raw
1. MT2 / Melanotan-II (121062-08-6) Melanotan-II (121062-08-6) dia analogie synthetikan'ny hormonina peptide α-melanocyte-stimulating hormone (α-MSH). Melanotan-II dia nomena ho toy ny tifitra hamokatra fivoarana amin'ny lehilahy manana ED (disfunction), mifono hoditra, ary miaro ny kanseran'ny hoditra vokatry ny fiposahan'ny masoandro. ★★★★★
2. PT-141 (189691-06-3) PT-141 (189691-06-3) dia fantatra koa amin'ny hoe Bremelanotide ary nalaza noho ny fahaizany mikarakara fatiantoka ara-pananahana amin'ny lehilahy sy vehivavy. Ankoatra izany, dia nampiasaina koa ho toy ny mpitrandraka fitrandrahana voajanahary voajanahary ary tsy misy masoandro nanomboka tamin'ny PT-141 novolavolaina avy amin'ny hormonina Melanotan 2 izay fantatra fa manampy amin'ny maizina ny hoditra. ★★★★★
3. BPC 157 (137525-51-0) Ny BPC 157 (137525-51-0) dia peptide manokana izay nesorina avy amin'ny proteinina miaro amin'ny gastrointestinal. Ny BPC 157 dia mety manana anjara andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fanasitranana sy ny famerenana indray ny sela ao anaty rafi-pitatitra na ao anaty hozatra. ★★★★★
4. Degarelix (214766-78-6) Degarelix (214766-78-6) dia fitsaboana amin'ny homamiadana izay miankina amin'ny homamiadana. Ny fiankinan'ny hormonina dia midika hoe mila sela hormonina ny sela homamiadana mba hitombo.Degarelix miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana ny gonadatrophin mamoaka ireo tsiranoka momba ny hormonina ao anaty kelin'ny pituitary ... ★★★★★
5. GHRP-2 (158861-67-7) Ny vovony GHRP-2 (158861-67-7) dia ny famokarana matanjaka be tokoa amin'ny famoahana peptide. Afaka manampy amin'ny fahazoana miakatra ny habetsaky ny vatana tsy mihetsika amin'ny fihodinana fihodinana / fihenam-bidy, ny fatiantoka amin'ny vatana. Ny vovony GHRP-2 dia afaka mampitombo ihany koa ny fahasimban'ny taolana ary hanatsarana ny fanentanana amin'ny firaisana ara-nofo sy ny mitondra fiara ... ★★★★
6. CJC1295 tsy misy DAC (863288-34-0) CJC 1295 tsy misy DAC (863288-34-0) izay fantatra ihany koa (GRF1-29), dia antsoina hoe Growth Hormone Rilisation Peptide (GHRP), dia peptide hormonina vita amin'ny asidra amine. Ampiasao ny CJC 1295 tsy misy vovobony DAC mampitombo ny lanjan'ny hozatrao, mampatanjaka ny hozatrao, ary manary tavy amin'ny vatanao .. ★★★★
7. Tesamorelin (218949-48-5) Tesamorelin (218949-48-5) dia hormone mitombo mampiala ny analog (GHRH). Mamatotra sy mandrisika ireo olona mora taitra amin'ny GHRH amin'ny fatrany toy ny GHRH endogen. Ny tombotsoany dia misy fiantraikany nootropic (cognition tsara kokoa), ... ★★★★
8. Pramlintide (196078-30-5) Pramlintide (196078-30-5) dia analog-non-am-amyloidogen ny amylin hormonan'ny peptide antidiabetika ary ampiasaina ao amin'ny diabeta (miaraka amin'ny karazana 1 sy 2). Pramlintide dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny marary izay tsy afa-drà ny ra. ★★★★
9. Teriparatide Acetate (99294-94-7) Teriparatide Acetate (99294-94-7), pTH (1-34) (olombelona) acetate) dia polypeptide izay ahitana ny 1-34 amina asidra amine amina hormonina parathyroid. Mampitombo ny halavan'ny fitrandrahana mineraly sy ny tanjaky ny taolana izany, izay mety hisorohana ny fisarahana, .... ★★★
10. Liraglutide (204656-20-2) Liraglutide (204656-20-2) dia sela GLP-1 ary fanafody ampiasaina hitsaboana ny diabetes mellitus type 2 sy ny hatavezana. izay lysine amin'ny toerana 34 dia nosoloina arginine, ary ny asidra palmitika dia nakambana tamin'ny glutamoyl spacer ho lysine amin'ny toerana 26 .... ★★★
Package size: 5g / kitapo, 10g / kitapo, 50g / kitapo Availability: Ao amin'ny staoky
Mahatsiaro marary ianao ary malahelo rehefa avy nanindrona Melanotan-II.
Melanomas manangana, izay mety mitarika amin'ny homamiadan'ny hoditra na aretina hafa amin'ny hoditra.
ý fampiasana maharitra Melanotan-II dia mety hitarika ho amin'ny fandringanana sela hozatra.
Azafady ajanony ny fampiasana Melanotan-II mandritra ny fitondrana vohoka sy ny famahan-jaza.
Melanotan-II (121062-08-6) dia analogie synthetikan'ny hormonina peptide α-melanocyte-stimulating hormone (α-MSH). Melanotan-II dia nomena ho toy ny tifitra hamokatra fivoarana amin'ny lehilahy manana ED (disfunction), mifono hoditra, ary miaro ny kanseran'ny hoditra vokatry ny fiposahan'ny masoandro.
Fitsaboana ny lahy sy vavy ara-pananahana ho an'ny lehilahy. Ny PT-141 dia manampy ny lehilahy amin'ny fananganana, manome libido ary mitsabo ny aretim-po.
Fitsaboana ny taovam-pananahana amin'ny vehivavy. Ny vehivavy dia mampiasa PT 141 izay afaka manampy amin'ny fampitomboana ny faniriana ara-pananahana ao amin'ny vehivavy, ary ny vokatra dia maharitra ela.
Ny PT-141 dia manampy amin'ny fampakarana ny haavon'ny angovo voajanahary, indrindra ho an'ny olona izay matetika reraka, reraka na tsy manana angovo betsaka.
PT-141 dia novolavolaina avy amin'ny hormonina Melanotan 2 izay fantatra fa manampy amin'ny maizina ny hoditra, nampiasaina ho toy ny mpitaiza menaka voajanahary sy tsy misy masoandro izany.
PT-141 dia manana vokatra tsara ary maharitra ela kokoa, tsy misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny olona iray.
Matetika ny fitomboan'ny tosidra dia rehefa mitsindrona PT-141.
Ny lozika, aretin-doha, fandehanana ary fiakaran'ny vidin'ny firaisana ara-nofo dia vitsy amin'ireo fiantraikany ratsy indrindra.
Ny mpampiasa sasany dia hiaina fanairana mena, tohatra, fanelingelenana, na fanaintainana ary tsy fahazoana aina amin'ny toerana tsindrona rehefa mampiasa tsindrona.
Tsy ny rehetra no hanana valiny mitovy rehefa avy mampiasa PT-141 ao anatin'ny fotoana fohy.
PT-141 (189691-06-3) dia fantatra koa amin'ny hoe Bremelanotide ary nalaza noho ny fahaizany mikarakara fatiantoka ara-pananahana amin'ny lehilahy sy vehivavy. Ankoatra izany, dia nampiasaina koa ho toy ny mpitrandraka fitrandrahana voajanahary voajanahary ary tsy misy masoandro nanomboka tamin'ny PT-141 novolavolaina avy amin'ny hormonina Melanotan 2 izay fantatra fa manampy amin'ny maizina ny hoditra.
# 3 Bpg 157 Powder
Ny BPC 157 dia manampy amin'ny fifehezana ny fanaintainana ateraky ny fahanterana.
Ny BPC 157 dia afaka manohana ny famerenana amin'ny laoniny ny fizotran'ny angiogenesis.
Ny BPC 157 dia afaka manampy amin'ny fanasitranana ny fery, ny fahasimban'ny tsina.
Ny BPC 157 dia misy singa manasitrana avo ho an'ny hozatra sy tonon-taolana izay manafaka ny fanaintainan'ny mpivarotra vatana sy mpanentana mavesatra.
Ny BPC 157 dia manampy amin'ny fanasitranana ireo taova simba, mitaona ny atidoha ary miaro ny fiasan'ny taova ao amin'ny vatana.
Tsy nisy fiantraikany manan-danja izay voamarina niaraka tamin'ny BPC 157.
Marary ny aretin-kozatra na aretin-kozatra rehefa tsindrona BPC 157.
Ny BPC 157 dia afaka manatsara ny fitomboan'ny homamiadana satria proangiogenika izany.
Mbola eo am-pikarohana klinika ny BPC 157 ary tsy misy fivoarana midadasika.
Ny BPC 157 (137525-51-0) dia peptide manokana izay nesorina avy amin'ny proteinina miaro amin'ny gastrointestinal. Ny BPC 157 dia mety manana anjara andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fanasitranana sy ny famerenana indray ny sela ao anaty rafi-pitatitra na ao anaty hozatra.
# 4 Degarelix vovoka
Product Name: Ny vovony Degarelix
Gonadotropin Cytostatic-famoahana ny Analogs Hormone.
Navotsotra i Gonadotropin Antagonista mpahazo ny Hôroneô.
Degarelix dia ampiasaina hitsaboana marary mararin'ny prostate.
Ny voka-dratsin'i Degarelix dia mety ho azo tantanana. Betsaka ny safidy azo hanamaivana na hanakana ny voka-dratsin'ny degarelix.
Nandefitra tsara i Degarelix, ary tsy nisy ny loza ratsy nitranga izay heverina ho mifandraika amin'ny fitsaboana fandalinana ary tsy mahazaka fanehoan-kevitra alikaola.
Degarelix dia tsy asiana fampiasana azy amin'ny vehivavy sy ny ankizy.
Aza mitantana degarelix amin'ny fitantanana intravenous. Degarelix dia natao ho an'ny fitantanana subcutanus irery.
Degarelix dia contraindicated amin'ny marary manana hypersensitivity fantatra amin'ny zava-mahadomelina na ny singa amin'ny singa.
Ny fitsaboana miaraka amin'ny degarelix dia mety hiteraka fihenan'ny famoronana mineraly amin'ny taolana ary tokony ampiasaina amin'ny fitandremana amin'ny marary manana osteoporosis.
Degarelix (214766-78-6) dia fitsaboana amin'ny homamiadana izay miankina amin'ny homamiadana. Ny fiankinan'ny hormonina dia midika fa mila sela hormonina ny sela homamiadana mba hitombo.Degarelix miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana ny gonadatrophin mamoaka ireo tsiranoka momba ny hormonina ao anaty glande pituitary ao anaty ati-doha. Ny glandy pituitary dia ajanony ny famokarana hormonina luteinising. Ny hormonina lutenising avy eo dia tsy misy afaka hampihetsika ny testes hanao testosterone.
Product Name: Vovoka GHRP-2
GHRP ‐ Ny vovony 2 dia mihena ny tavy amin'ny vatana, mampitombo ny fitomboan'ny vatana tsy mihetsika, manatsara ny torimaso, mitombo ny famokarana IGF-1 ary mitombo ny fanamboarana sela
GHRP ‐ Ny vovony 2 dia mampitombo ny fahatsapana hanoanana sy ny fihinanana sakafo, mihena ny fahafaham-po mialoha sy manatsara ny hypoglycemia, mihena ny tavy amin'ny alàlan'ny lipolysis.
GHRP ‐ Ny vovony 2 dia mampitombo ny fitazonana ny kalsioma ary noho izany mampatanjaka ny taolana amin'ny fampitomboana ny fitrandrahana ny taolana, manampy ny mpanao bodybuilder mampitombo ny fiaretana.
GHRP ‐ Ny vovony 2 dia manatsara ny faniriana ara-pananahana sy ny fiara ary manao izany amin'ny famporisihana hypothalamus
GHRP ‐ 2 dia mety mamela anao hahatsiaro ho reraka sy harerahana
GHRP ‐ 2 dia mitahiry ny fihazonana rano, ny fikorontanana ary ny fahatsifanana any amin'ny faran-tanana
GHRP ‐ 2 dia mihena ny fahatsapana ny insuline
Ny vovony GHRP-2 (158861-67-7) dia ny famokarana matanjaka be tokoa amin'ny famoahana peptide. Afaka manampy amin'ny fahazoana miakatra ny habetsaky ny vatana tsy mihetsika amin'ny fihodinana fihodinana / fihenam-bidy, ny fatiantoka amin'ny vatana. Ny vovony GHRP-2 dia afaka mampitombo ihany koa ny fahasimban'ny taolana ary hanatsarana ny fanentanana sy ny fitondrana fiara. Amin'ny fisakafoanana sy fampiofanana ara-dalàna, ny mpampiasa dia afaka mampiasa GHRP-2 miaraka amin'ny GHRH ho fitaovana azo antoka sy mahomby ho an'ny atleta sy bodybuilders.
# 6 CJC1295 Raha tsy misy DAC Powder
Product Name: CJC1295 Raha tsy misy vovony DAC
filaharany: Tyr-DAla-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Gln-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Ala-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp- Ile-Leu-Ser-Arg-NH2
Package size: 1g / kitapo, 5g / kitapo, 10g / kitapo Availability: Ao amin'ny staoky
Ny "CJC 1295 tsy misy DAC" dia mampitombo ny tahan'ny synt synt protein n amin'ny vatana.
"CJC 1295 tsy misy DAC" dia mampisondrotra ny rafi-kery fanefitra, afaka mampivoatra ny tahan'ny fanarenana ny ratra, mety amin'ny fanamboarana sela (taova sy hoditra).
"CJC 1295 tsy misy DAC" dia manatsara ny elastika sy ny hoditra mifangaro.
"CJC 1295 tsy misy DAC" dia afaka mahazo aina indray aorian'ny miasa rehefa tsy miasa fotoana kelikely.
Mampiasà vovoka "CJC 1295 tsy misy DAC" dia mampitombo ny fihenan-taolana.
Ny fampiasana "CJC 1295 tsy misy DAC" dia mety hiteraka mamontsina, hikoroka, hihena ny insuline sy fihazonana rano.
Aorian'ny tsindrona "CJC 1295 tsy misy DAC" dia hahatsiaro tena ho reraka, mangirifiry, mangitsokitsoka na mihosin-doha ianao.
Aorian'ny fampiasan'ny vovoka "CJC 1295 tsy misy DAC" dia hahazo masim-batana ianao matavy, manaitaitra sela amin'ny hafa.
CJC 1295 tsy misy DAC (863288-34-0) izay fantatra ihany koa (GRF1-29), dia antsoina hoe Growth Hormone Rilisation Peptide (GHRP), dia peptide hormonina vita amin'ny asidra amine. Mampiasà CJC 1295 tsy misy vovobony DAC mampitombo ny lanjan'ny hozatrao tsy miankina, manotrona ny hozatrao, ary manary tavy amin'ny vatana. CJC 1295 tsy misy vovobony DAC dia zava-dehibe koa amin'ny fanampiana ny fanafainganana ny fanaintainana amin'ny ratra, ny fanamafisana ny rafi-kery fanefitra, ny fampihenana ny tavy amin'ny vatana, ny fitomboan'ny fahasimban'ny taolana ary ny fanamboarana ireo sela amin'ny hoditra sy taova. Izy io dia iray amin'ireo hormonina fitomboana azo antoka indrindra sy ny fanampin-tsakafo azo antoka indrindra ho an'ny bodybuilders.
Product Name: Tesamety vita amin'ny Tesamorelin
filaharany: Unk-Tyr-Ala-vipera-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln- vipera-Ile-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-Ser-Asn-Gln-Glu-Arg-Gly-Ala-Arg-Ala-Arg-Leu-NH2
Ny vovony Tesamorelin dia mampitombo ny famokarana voajanahary HGH (hormone mitombo ny olombelona).
Ny vovony Tesamorelin dia mampitombo ny IGF-1 (fitomboan'ny insuline-1) tsy misy manova ny tarehimarika glucose.
Ny vovony Tesamorelin dia mampihena triglycerides.
Ny vovony Tesamorelin Mampihena ny tavy amin'ny tavy manodidina ireo taova ao anatiny.
Ny vovobony Tesamorelin dia manatsara ny fahitana amin'ny olon-dehibe mihoatra ny taona 60.
Taorian'ny tsindrona Tesamorelin dia miteraka fanehoan-kevitra amin'ny tranokala (redness, gout, pain, irritation, nivonto, mpandeha, na bruising). Ny aretina amin'ny hozatra koa dia mety hitranga.
Ny fampiasana ny vovobony Tesamorelin dia mety miteraka insomnia, hatsemboka amin'ny alina, famoizam-po
Ny fampiasana Tesamorelin dia mety hahatsapa ho voan'ny mualalotra, mandoa ary kibo.
Tesamorelin (218949-48-5) dia hormone mitombo mampiala ny analog (GHRH). Mamatotra sy mandrisika ireo olona mora taitra amin'ny GHRH amin'ny fatrany toy ny GHRH endogen. Ny tombony azo dia misy fiantraikany nootropic (kognition tsara kokoa), mampihena triglycerides, mihena ny hatevin'ny rindrina arteri karotida, mihena ny tavy matavy visceral, ary mihena C-reactive proteinina, mariky ny fivontosana.
Ny vovobony Raw Tesamorelin dia andrasana hampiasana ny tavy amin'ny vavony be loatra amin'ny marary voan'ny VIH izay manana lipodystrophy. Izy io dia afaka mampitombo ny famokarana voajanahary HGH (hormone mitombo ny olombelona), mampitombo ny IGF-1 (fitomboan'ny insuline-1), tsy manova ny tarehimarika glucose. Ny fampiharana ny tsindrona tesamorelin dia ao amin'ny kilasy iray antsoina hoe analogina miteraka hormonina-releasing factor (GRF). Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny famokarana akora voajanahary iray izay mety hampihena ny habetsaky ny tavy amin'ny vatana. Saingy tsy tokony hampiasa tsindrona tesamorelin ianao hampihenana ny lanjanao.
# 8 Pramlintide Powder
Product Name: Vovonan'ny Pramlintide
filaharany:Lys-Cys-Asn-Thr-Ala-Thr-Cys-Ala-Thr-Gln-Arg-Leu-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-ny-Ser-Ser-Asn-Asn-Phe-Gly-fiterahana Ile-Leu-Pro-Pro-Pro-Pro-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH2 (Cys2 & Cys7)
Pramlintide dia ao amin'ny kilasy fanafody iray antsoina hoe antihyperglycemics.
Pramlintide dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretin'ny metabolika.
Ny fampiasana Pramlintide dia mety hampihena ny voka-dratsin'ny aretim-po
Pramlintide dia neken'ny FDA, ampiasao amin'ny karazana 1 ary ny marary diabeta 2 izay mampiasa insuline.
Pramlintide dia mety hanemotra ny fidiran'ny fanafody am-bava
Ny fampiasana Pramlintide maharitra mandritra ny fotoana maharitra, ny olona izay voan'ny diabeta sy siramamy be dia be no afaka miteraka zava-tsarotra mahery vaika na tandindomin-doza.
Ho hitanao ny mena, ny fery, ny bruising, na ny fanaintainana dia mety hitranga amin'ny tranokala tsindrona pramlintide.
Mahatsapa ny fahazotoan-komana ianao, fanaintainana ny vavony, reraka tafahoatra, fitoniana, kohaka, valan-doha na fanaintainana miaraka aorian'ny tsindrona Pramlintide.
Pramlintide dia tokony hasiana fitandremana amin'ny olona misy fahantrana eo amin'ny maso na ny dexterity.
Pramlintide (196078-30-5) dia analog-non-am-amyloidogen ny amylin hormonan'ny peptide antidiabetika ary ampiasaina ao amin'ny diabeta (miaraka amin'ny karazana 1 sy 2). Ny Pramlintide dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny marary izay tsy afa-mitantana ny insuline na ny insuline ary ny fanafody am-bava ny diabeta.
Pramlintide dia ao amin'ny sokajy iray amin'ny fanafody antsoina hoe antihyperglycemics, ampiasaina amin'ny insuline misakafo ara-tsakafo mba hifehezana ny haavon-drà ao amin'ny olona voan'ny diabeta. Ao amin'ny synergy miaraka amin'ny amylin endogen, ny pramlintide fanampiana amin'ny fifehezana ny gliôma amin'ny alàlan'ny fampihenana ny sakana amin'ny gastric, ny fampiroboroboana ny fahafaham-po amin'ny alàlan'ny mpandray sela hypothalamic (hafa ekena noho ny GLP-1), ary ny fanakanana ny tsiambaratelo tsy mendrika amin'ny glukagon, mba hisorohana ny siramamy amin'ny fatran'ny ra miakatra avo be loatra sakafo. Pramlintide ihany no fanafody nankatoavin'ny FDA hampihena ny siram-dra amin'ny diabeta karazana 1 hatramin'ny insuline tamin'ny 1920 tany am-boalohany.
Product Name: Teriparatide Acetate vovony
Teriparatide acetate dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny osteoporose amin'ny lehilahy sy vehivavy izay manana tratran'ny aretina lehibe amin'ny taolana, manampy hampihena ny mety hisian'ny ratra.
Teriparatide acetate dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny osteoporosis postmenopausal sy ny glucocorticoid Induced Osteoporosis.
Teriparatide acetate dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny Osteoporosis hypogonadal any Males.
Teriparatide no agon'ny fankatoavana voalohany FDA amin'ny fitsaboana ny osteoporosis izay mandrisika ny fananganana taolana vaovao.
Teriparatide Acetate dia manapaka ny risika amin'ny fihenan-tsasatra amin'ny antsasaky ny antsasaky ny atsasatra fa tsy mampihena ny risika ateraky ny famoretana sandry na tànana.
Mahatsapa aretin'andoha, mie, marary, ary fanaintainan'ny tongotra ianao rehefa avy mampiasa Teriparatide Acetate.
Teriparatide Acetate dia niteraka kansera amin'ny taolana (osteosarcoma) ao amin'ny biby nefa tsy fantatra raha hitranga amin'ny olona mampiasa ity fanafody ity.
Hahatsapa fihenam-po na mikorotsaka ao amin'ny tratranao ianao taorian'ny tsindrona Teriparatide Acetate.
Teriparatide dia tsy tokony homarihina ho an'ny olona manana risika mitombo ho an'ny osteosarcoma.
Tsy tokony hanomboka teriparatide ireo marary mandra-fanitsiana ny tsy fahampian'ny otrikaina D.
Tsy tokony hampiasa Teriparatide Acetate ianao raha tsy mahazaka azy.
Teriparatide Acetate dia tsy natao amin'ny ankizy na tanora lehibe izay mitombo ny taolany.
Teriparatide Acetate (99294-94-7), pTH (1-34) (olombelona) acetate) dia polypeptide izay ahitana ny 1-34 amina asidra amine amina hormonina parathyroid. Mampitombo ny halavan'ny fitrandrahana mineraly sy ny tanjaky ny taolana, izay mety hisorohana ny fihenan-doha, ary amin'ny maha-solika anabolika mahomby ampiasaina amin'ny fitsaboana ny osteoporosis vokatry ny menopause, ny fampiasana ny steroid, na ny tsy fahombiazan'ny gonadal. Ankoatr'izay, Teriparatide Acetate dia azo ampiasaina koa marika mba hanamafisana ny fanamboarana ny fracture ary hitsaboana ireo fihenam-bidy. Teriparatide dia mitovy amina ampahany amin'ny hormonina parathyroid (PTH) an'ny olona ary ny fampiasana an-tserasera dia manetsika ny osteoblast mihoatra ny osteoclasts, izay mitarika fitomboan'ny tena taolana. Noho izany, ny famolavolana taolana vaovao dia mety hamporisika amin'ny fomba mahomby amin'ny alàlan'ny tsindrona thriparatide indray mandeha isan'andro isan'andro amin'ny feny na ny kibony ka mitarika fitomboan'ny fitrandrahana vy.
Teriparatide dia nankatoavin'ny Orinasa fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina (FDA) tamin'ny 26 Novambra 2002, ho an'ny fitsaboana ny osteoporosis amin'ny lehilahy sy ny vehivavy postmenopausal izay tandindomin-doza noho ny fahatapahan'izy ireo. Ny fanafody dia ekena ihany koa ny fampitomboana ny fihenan-taolana eo amin'ny lehilahy amin'ny osteoporosis voalohany na hypogonadal izay misy atahorana ho potika. Ary, Teriparatide dia amidy amin'i Eli Lilly sy Company eo ambany marika Forteo.
# 10 Liraglutide Powder
Product Name: Liraglutide vovoka
filaharany:H-ny-Ala-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-vipera-Val-Ser-Ser-Tyr-Leu-Glu-Gly-Gln-Ala-Ala-Lys (γ-Glu-palmitoyl) -Glu -Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-Val-Arg-Gly-Arg-Gly-OH
Package size: 1g / kitapo, 5g / kitapo Availability: Ao amin'ny staoky
Ny Liraglutide dia manatsara ny fifehezana siramamy amin'ny olon-dehibe sy ny ankizy kely indrindra farafahakeliny 10 izay manana karazana 2 diabeta mellitus.
Ny Liraglutide dia manampy amin'ny fampihenana ny mety hisian'ny aretim-po mahery vaika toy ny aretim-po na fikapohana amin'ny olon-dehibe izay voan'ny diabeta 2 ary voan'ny aretim-po.
Liraglutide dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny hatavezana.
Ny Liraglutide dia mampitombo ny famoahana insuline amin'ny pancreas ary mampihena ny famoahana ny glukagon be loatra.
Liraglutide dia neken'ny FDA ao amin'ny 2019 ho an'ny fitsaboana zaza 10 taona na mihoatra noho ny diabeta 2.
Victoza dia tsy tokony hampiasaina amin'ny fitsaboana ny ketoacidosis diabeta na mametaka diabeta 1 ary tsy tokony hampiasaina ho mpitsabo voalohany amin'ny fitsaboana ny diabeta taorian'ny tsy fahombiazan'ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena.
Ny Liraglutide dia mety hiteraka ny homamiadana pancreatitis sy tiroida
Mety hahatsapa siramamy ambany be ianao, mangetaheta na mafana, mandoa ary mikorontana rehefa avy ampiasaina Liraglutide.
Ny Liraglutide dia mety hampihena ny fandevonan-kanina, ary mety handany fotoana bebe kokoa ny vatanao mba hahazoana ny fanafody entinao am-bava.
Azafady ajanony ny fampiasana Liraglutid mandritra ny fitondrana vohoka.
Tsy tokony hampiasa liraglutide ianao raha toa ka tsy mahazaka azy, na manana karazana endocrine neoplasia karazana 2 (fivontosana eo amin'ny glandanao) sy ny tantaram-pianakaviana na tantaram-pitondran-tsamirery medullary (karazana kankana tiroida).
Liraglutide (204656-20-2) dia sela GLP-1 ary fanafody ampiasaina hitsaboana ny diabetes mellitus type 2 sy ny hatavezana. izay lysine amin'ny toerana 34 dia nosoloina arginine, ary ny asidra palmitika dia nakambana tamin'ny glutamoyl spacer ho lysine amin'ny toerana 26. Liraglutide vovoka dia gliosida toy ny peptide-1 recepton agonist (GLP-1 receptor agonist) izay fantatra koa amin'ny hoe addetin mimetics. Miasa amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny famoahana insuline amin'ny pancreas ary mampihena ny famoahana ny glukona be loatra.
Tsy toy ny GLP-1, ny vovony Liraglutide dia manana mombamomba ny pharmacokinetic sy ny pharmacodynamic amin'ny olona mety amin'ny fitantanana isan'andro.
Liraglutide dia neken'ny FDA ao amin'ny 2014 ary ny Fikambanan'ny Fitsaboana Eoropeana any 2015, ho an'ny olon-dehibe manana indizara faobe (BMI) an'ny 30 na lehibe (obesity) na BMI an'ny 27 na lehibe kokoa (matavy) izay manana lanja iray farafahakeliny -mifandray mifandray. Liraglutide dia neken'ny FDA ao amin'ny 2019 mba hikarakarana ny zaza 10 taona na mihoatra noho ny diabeta 2, ka mahatonga azy io ho fanafody tsy insuline voalohany nekena hikarakara ny diabeta 2 amin'ny zaza hatramin'ny nankatoavin'ny metformin tao amin'ny 2000.